Masangano evanotengesera mumigwagwa yeguta reHarare anoti nhengo dzawo dziri kutsutsumwa nekuramba dzichishungurudzwa nemapurisa ekanzuru pamwe nevashandi vekanzuru yeguta reHarare, kunyange hazvo paine mutongo wedare repamusoro wekumisa kubviswa kwavo mumigwagwa kusvika nyaya iri kudare iri yanzwikwa.
Izvi zvakazoita kuti rimwe remasangano aya, reVendors Union Zimbabwe rinyore tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemukati menyika, VaIgnatius Chombo, richinyunyuta nezvarinoti zviri kuitwa nemapurisa zvekuvatorera zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa.
Mutsamba iyi, sangano iri rinoti mapurisa ari kushandisa chisimba chakanyanyisa mukuedza kwavo kubvisa vanotengesera mumigwagwa ava.
Mukuru wesangano iri, VaStan Zvorwadza, vanoti vane ruzivo rwekuti zvinhu zvavo zviri kutorwa nemapurisa zviri kuzogovanwa pakati pemapurisa aya nevashandi vekanzuru, kwete kuti zviparadzwe sezvo zviri kunzi zviri kukonzera kupararira kwechirwere che typhoid.
Sangano reVendors Intiative for Social and Economic Transformation rakakwidzawo nyaya yekushungurudzwa kwevanotengesa mumigwagwa ava, izvo zvakazoita kuti dare reHigh Court rimise kushungurudzwa kwavo kusvika nyaya yavo yapera kumatare.
Sangano iri riri kutiwo riri kunyunyuta nekuramba mapurisa ari kuvashungurudza.
Studio7 yakundikana kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya iyi.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare, VaMichael Chideme, varamba mashoko ekuti vashandi vavo vari kutora zvinhu zvinenge zvatorerwa vanotengesa ava.
VaChideme vanotiwo kanzuru yavo haisi kuzodzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso, vachiti vachaenderera mberi nekubvisa vanhu munzvimbo dzisingabvumidzwe kutengesera.
Varambawo kuti pane mutemo wedare unovarambidza kubvisa vanhu ava muguta, vachiti zvavanoziva ndezvekuti dare harina kuzivisa mutongo waro, zvichireva kuti zvinhu zvakangomira sezvazviri.
Hurukuro naVaStan Zvorwadza